Taorian’ilay fahavaratra nafanan’ny hetsika, miady hevitra momba ny andraikiny amin’ny ady atao amin’ny fiovaovan’ny toetrandro ny vahoaka Alemà · Global Voices teny Malagasy
Laharana faha-27 amin'ny CCPI, maridrefin'ny Fifanarahana tany Parisy i Alemaina
Mpanoratra Maxim Edwards, Julia K., Isabelle Gore Nandika Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 02 Febroary 2020 14:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Deutsch, українська, Français, Español, Nederlands, English
Ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny fitokonana momba ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tany Berlin ny 20 septambra 2019. Sary avy amin'i Maxim Edwards, nahazoana alàlana.
Mir ist's zu warm! Mafana loatra amiko izany !
Iray amin'ireo teny faneva an-jatony ao anatin'ireo lamba, saina ary sorabaventy marobe nolanjaina namakivaky an'i Tiergarten ao afovoan'i Berlin ho any amin'ny Bundestag, tranon'ny parlemanta alemàna, ity teny faneva ity. Tampoka, nanoloana ny vavahadin'i Brandenburg, nisambotra ny fanamafisam-peo mba hitenenany i Carola Rackete, ilay kapitenin-tsambo alemàna izay voasambotra satria nampiantsona ny sambo mpamonjy voinan'ireo mpitsoa-ponenana tany amin'ny seranantsambon'i Italia nefa tsy nahazo alàlana.
Miisa 100.000 mahery ireo vahoaka niandry handre izay holazainy ( amin'ny ankapobeny, heverina ho 1,4 tapitrisa eo ho eo ireo mpanao fihetsiketsehana namonjy an'i Berlin tamin'io andro io, hoy ny mpikarakara) Ary raha nisy ny hafaliana, dia noho ny fahatsapana firaisankina tsy azo hozongozonina sy ny tanjona iraisana.
Fandraisan'ny mponin'i Berlin anjara tamin'ny fitokonana erantany hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tamin'ny 20 septambra 2019 ity hetsika ity. Tsy ity no hetsika voalohany nataon'ny Fridays for Future, hetsika ekolojia iray naorinà tovovavy soedoà iray mpikatroka vao 15 taona, Greta Thunberg. Ny 15 martsa sy ny 24 may -n'io taona io ihany, efa nanaovana antso ny fitokonana maneran-tany hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Olona manodidina ny 1,8 tapitrisa eo ho eo avy amin'ny firenena 125 no nandray anjara tamin'ny hetsika farany.
Tsy nofidiana fahatany akory ny datin'ny Septambra ho fitokonana maneran-tany hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny 20 Septambra, nivory ny kabinetran'ny governemanta alemàna misahana ny toetrandro mba hanapa-kevitra momba ny hoavin'ny drafitr'asa ekolojikan'i Alemaina. Efa an-dàlana ihany koa ny fanomanana ilay fihaonana manaraka antampony momba ny toetrandro hataon'ny Firenena Mikambana any New York City. Araka ny tatitry ny tranonkalan'ny Fridays for Future dia fara-fahakeliny tanàna sy tanàndehibe 575 tany Alemaina no nanaovana hetsika tamin'io andro io.
Maro ny olona nandray ny haino aman-jery sosialy hizaràna ny zavatra tsapa avy amin'ireo tanàna maro manerana an'i Alemaina ireo.
Ohatra, niaraka ireo mpanao fihetsiketsehana tany Freiburg mba hihorakoraka (ara-bakiteny) :
Alefaso ny feo !
Ary nozarain'i David Croyé ny zavatra tsapa tamin'ny hetsika teo akaikin'ny vavahadin'ny Brandenburg any Berlin :
#Fitokonana hoan'ny toetrandro Vavahadin'i Brandenburg Berlin. Hafatra mazava ho an'ny politika !
Mazava ireo fitakian'ny hetsi-panoherana manokana sy ilay hetsika amin'ny ankapobeny : fanekena ny tanjon'ny Fifanarahana hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tany Parisy, fifanarahana erantany momba ny toetrandro. Ary hatramin'ity fahavaratry ny hetsi-panoherana ity, dia niady mafy ny vahoaka alemàna mba hahalalàna raha toa ka raisin'ny governemantan-dry zareo ho matotra ireo adidy ireo.
Tamin'ny 15 desambra 2015, iray tamin'ireo firenena 195 izay nanao sonia ilay fifanarahana tany Parisy i Alemaina. Ny hampihenàna ny fihafanàn'ny tany ho latsaky ny 2°C no tanjona voalohan'io fifanarahana io, mba hanakelezana na, raha azo atao dia hisorohana ny vokatry ny loza aterany. Nanaiky ny handinika isaky ny dimy taona ny fandrosoany sy ny fomba famahàny ny olana ireo mpanao sonia mba hanamafisana ny ezaka ataon'izy ireo ary raha ilaina dia mirona mankany amin'ny tanjona mafimafy kokoa.
Nisy fotoana tamin'ny 2018, nihanazava fa tsy afaka hanatratra ny tanjona napetrany ho an'ny 2020 i Alemaina. Amin'ireo fanjakana mpandray anjara rehetra, dia laharana faha -27 i Alemaina amin'izao fotoana izao amin'ny mari-pandrefesana ny fivoarana amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro (CCPI), izay manara-maso ny fandrosoan'ireo firenena manoloana ny Fifanarahana tany Parisy. Taona vitsivitsy lasa izay, dia tsy nihetsika ny fampihenàna ny fandefasana entona dioksidanà karbôna tao Alemaina. Araka ny tatitry ny Statista, ny taona 2016, ny 2,23 isanjaton'ny entona dioksidanà karbôna maneran-tany dia an'i Alemaina, raha toa ka manodidina ny 1 isanjato monja ny an'ny vahoaka maneran-tany. I Shina no laharana voalohany 28,21 isanjato ny azy.
Tsy dia tsara loatra ny fijery ny tontolo iainana amin'ny sehatra sasany. Ohatra, na dia ny fiaramanidina aza no fitaovam-pitaterana manimba ny ekolojia indrindra dia niakatra ny isan'ny mpandeha fiaramanidina any Alemaina, teo ho eo amin'ny 136.000 tamin'ny 2004 ary lasa 220.000 ny 2018. Ambonin'izay, vinavinain'ny Sampana federaly misahana ny fitaterana an-tanety any Alemaina (Kraftfahrt-Bundesamt, na KBA rehefa afohezina) fa manodidina ny 47,1 tapitrisa ny isan'ireo fiarakodian'olontsotra voarakitra any Alemaina, firenena izay misy mponina 83 tapitrisa eo ho eo. Hanjakan'ny habetsahana mihoa-pampana sy ny fandanindaniam-poana ny indostria ara-tsakafo alemàna. Fehiny, eo ho eo amin'ny sakafo roa ambin'ny folo taonina isantaona no very any Alemaina, tokotokony ho 75 kg isan'olona.
“Vonjeo ny toetrandro : iadio izay anton'ny fifindramonina,” izany no vakin'ity doka fanentanana avy amin'ny hetsika mpitahiry Freie Wähler talohan'ny fifidianan'ny firaisambe eoropeana ity. Berlin, 2019. Sary (c): Maxim Edwards. Nahazoana alàlana.
Ho aiza àry i Alemaina manomboka izao, satria tsy ahoan'ireo mpanao politika ireo tanjona faran'izay tsotra amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro no sady mbola vao mainka notsinontsinoavina na teo aza ireo tsikera mikasika ireo drafitra tany am-piandohana ?
Misy ireo marika miseho hoe mipongatra amin'ny sehatry ny politikan'ny fifidianana ny hakiviana manoloana ireny lesoka ireny. Isan'ny tsimbadika ara-politika lehibe teto amin'ny firenena tamin'ity taona ity ny fitombon'ny fanohanana ny antoko Maitso nandritra ireo fifidianana Eoropeana sy teto an-toerana.
Tsara ny manamarika fa ny zava-nisy teo aloha dia ireo fifidianana solombavam-bahoaka eoropeana voalohany nanomboka tamin'ny ” krizin'ireo mpitsoa-ponenana” tany Eoropa tamin'ny 2015-2016. Araka izany, natahoran'ireo mpanao fanadihadiana ny halakin'ny fisondrotan'ny fanohanana ireo antokon'ny hery ankavanana mpanilika mpitsoaponenana. Amin'ny fomba fijery hafa, dia izay no zava-misy, miaraka amin'ny fitombon'ny fanohanana ny AfD amin'ireo fifidianana isan-karazany manerana ny firenena tato ho ato.
Na izany aza, ny Bündnis 90 / Die Grünen, ohatra, dia nahazo ny 20,5 isanjaton'ny vato rehetra nanerana an'i Alemaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eoropeana 2019 tany Alemaina raha oharina tamin'ny 10,7 isanjaton'ny vato tamin'ny 2014.
Fa nahazo vahana vetivety ireo hetsika be fitetika sy fikomiana ara-politika. Ary farany, dia hita any Alemaina, tahaka ny any amin'ny firenena eoropeana sasany, ny fanararaotan'ireo tia tanindrazana avy amin'ny hery ankavanana ny fitombon'ny ahiahin'ny mponina momba ny olana ekolojika mba handrafetany endrika vaovao ho an'ireo politikan-dry zareo entina manohitra ny fifindràmonina.
Hatreto, izay ho fanapahankevitra faran'ny governemanta alemàna momba ny fepetra horaisiny amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no hany sisa andrasana. Efa mandeha ireo karazana fitoriana ny governemanta mikasika ny fitantanana ny olana momba ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo fepetra nokinasany. Tamin'ny 31 oktobra, nivoaka ny didim-pitsarana voalohany tamin'ny iray tamin'ireny fitoriana ireny : resy ireo mpitory ( mpiompy ‘bio’ telo sy ny Greenpeace ) noho ny governemanta efa namoaka fanambaràna momba ny fikasàny ary tsy namoaka fanerena fampanarahana ny lalàna. Fa na izany aza, nomen'ny mpitsara fahafahana hampiakatra ny fitoriana any amin'ny fitsarana momba ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana ireo mpitory, ary mbola mamela ny varavarana hisokatra amin'izay fitsarana mety hahazoan'ireo mpiompy sy ny Greenpeace rariny
Vao haingana teo, dia mbola neken'ny governemanta ihany ny fanombohana ny fanamboarana ilay tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny arina Datteln 4 hiasa amin'ny fahavaratra 2020 na teo aza ireo tsikera mafy momba ny fialàna tamin'ny sehatry ny angovo madio toy ny angovo azo avy amin'ny herin'ny rivotra. Ketraka tamin'ilay fanapahankevitra ireo mpikatroka ara-ekolojika izay nanasongadina fa manana andraikitra manokana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Alemaina amin'ny maha-firenena be indostria azy. Nampanontany tena ireo mpikatroka hoe tena nosainin'ny ‘chancelière’ Angela Merkel marina ve izay nolazainy talohan'ny fihaonana antampon'ny Firenena mikambana momba ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tany New York tamin'ny Septambra lasa teo rehefa nohamafisiny ny hoe “tontolo tokana ihany no ananantsika rehetra.”
Fa raha jerena ny marimaritra iraisana izay milaza fa tsy ananan'izao tontolo izao ny fotoana mba hampadeha mora ny hafainganan'ny fiovaovan'ny toetrandro, hafiriana no azon'ny vahoaka alemàna iandrasana vao hifanaraka ny teny sy ny asan'ireo mpitondra azy ireo ?